"पैसा पर्ने एप्स, नि:शुल्क डाउनलोड गर्नुस्" | मेरो कलम
– एप्पलको आईफोन आईप्याड चलाउदै आउनुभएको छ भने एप्सपनी धेरै भन्दा धेरै प्रयोग गर्दै आउनु भएकै होला । कैयन नि:शुल्क डाउनलोड र केहि भने बकाईदा डल्लर तिरेरै खरिद गर्नु भएको पनी होला ।
१० जुन सन् १०१३ सम्मको तथ्याकंलाई हेर्ने हो भने एप्पलको एप्स स्टोरमा ९ लाख भन्दा वढी एप्सहरु भण्डारन भईसकेको छ । त्यस्तै मासिक औषत एउटा एप्स ५० हजार भन्दा वढी पटक डाउनलोड हुने गरेको छ । यी डाउनलोड भईरहेको एप्सहरुमा नि:शुल्क र श:सुल्क उत्तिकै मात्रामा छन् ।
नि:शुल्क त जुनसुकै समयमा डाउनलोड गर्न सकिन्छ तर शुल्क पर्ने एप्स नि:शुल्क पाए चै अहिल्य नै डाउनलोड गरिहाल्थे भन्ने लागेको होला हैन ? किन चिन्ता पैसा लाग्ने एप्स पनी निशुल्क डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ तर त्यसको लागी भने अर्को एप्स “एप्स गन फ्रि” ईन्सटल गर्नुपर्ने हुन्छ वा साईट भिजिट गरिरहदा पनी दैनिक पैसा पर्ने एप्स निशुल्क डाउनलोडको लागी जानकारी पाउनुहुनेछ ।
के हो एप्स गन फ्रि ?
एप्स डेभलपरले वेला वखत आफ्नो पपुलारिटीलाई अझ वढाउन र आफ्नो एप्सको प्रमोट गर्न पैसा पर्ने एप्सलाई पनी नि:शुल्क केहि घण्टादेखी केहि दिनसम्म डाउनलोड गर्न दिईरहेका हुन्छन् ।
निशुल्क डाउनलोड गर्न मिल्ने वनाउना साथै सोहि समयमा यो एप्स चै निशुल्क छ है डाउनलोड गरिहाल भनेर एप्स गन फ्रिले तपाईलाई जानकारी गराउने काम गर्दछ । यदि तपाईले खरिद गर्नै लाग्नुभएको एप्स निशुल्क पाउनुभयो भने त्यो भन्दा वढी काईदा अरु के भयो र ? अनी भएन त मज्जा । एप्स गन फ्रि ईन्सटल गरेर दैनिक नि:शुल्क एप्स डाउनलोड गर्दै मज्जा लुट्न सक्नुहुन्छ ।